Edgar Allan Poe Biology kunye neencwadi eziGqwesileyo | Uncwadi lwangoku
Xa singena ngesikhephe eyoyikisayo okanye ezenzululwaziBambalwa abayikhumbulayo into yokuba kwakukhe kwakho umbhali owayenesibindi sokuwela imida ethile kunye nokubheja kuhlobo olulodwa ngexesha lenguqulelo enkulu yoncwadi. Ngaphandle kobomi obudumileyo, u-Edgar Allan Poe waseMelika uyaqhubeka ukuba njalo ireferensi yoonobumba abangalunganga kunye nebali elifutshane kunye nemodeli yabo bonke ababhali ababekhe banobuganga bokuphila kuphela kubuxoki. Makhe sijonge U-Edgar Allan Poe ngobomi kunye neencwadi ezilungileyo Ukuze wazi iimfihlelo zale wizard imnyama.
1 I-Biography kaEdgar Allan Poe
2 Iincwadi ezigqibeleleyo zikaEdgar Allan Poe
2.1 Ingxelo ka-Arthur Gordon Pym
2.2 Ikati emnyama
2.3 Igciwane Bug
2.5 Gqibezela amabali
I-Biography kaEdgar Allan Poe
Uzalelwe eBoston ngoJanuwari 19, 1809, U-Edgar Allan Poe wabhaptizwa emva komlingiswa ovela ku-King Lear kaWilliam Shakespeare. Emva kohambo olusuka kwikhaya losapho lukayise xa uPoe wayenonyaka kuphela ubudala kunye nokusweleka kukamama wakhe kwisifo sephepha emva konyaka, uEdgar wahamba emhlabeni ephethe ifoto yabazali bakhe njengekuphela kwenkumbulo ebonakalayo yemvelaphi yakhe. Ngelixa udadewabo uRosalie ethathwe ngootatomkhulu notatomkhulu wakhe, uPoe yamkelwa ngumtshato kaFrances noJohn Allan, awafumana kuye imfundo e-United Kingdom ngaphambi kokuba abuyele eRichmond (eVirginia) ngo-1820.
Sele ekwishumi elivisayo, uPoe ubonakalisile izakhono zakhe zoncwadi Ukubhala umbongo kunina womntu afunda naye ogama lingu "To Helen", waqwalasela uthando lwakhe lokuqala olukhulu. Ngeli nqanaba, lo mntwana umnyama wayekhulisa ubuntu bokungazithembi kunye ne-hermetic ofumene kuncwadi okanye kwiminqweno yakhe yobuntatheli indlela yokufumana amandla kubo bonke abanye abantu awayezisusa kubo. Sele ngeentsuku zakhe zaseyunivesithi, loo mlinganiswa wagqiba ngokuchaza indoda eyayikholelwa ekubeni inolwazi oluphezulu ngaphandle kwento esisiseko. Ibhongo eliza kuncitshiswa xa utata wakhe owamkelekileyo engakwazi ukuhlawula amatyala kaPoe omncinci kwaye wagqibela ngokuyeka izifundo zakhe ukuze abhalise njengejoni eBoston. Ngexesha lomsebenzi wakhe wasemkhosini, wabhala iincwadi ezimbini zemibongo, elandelwa yincwadi yesithathu, ehlawulwa ngoogxa bakhe, eyapapashwa eNew York, apho uPoe wasaba khona emsebenzini wakhe wokuba ngumlobi.
Ngapha koko, Poe waba umbhali wokuqala owayezimisele ukuhlala kuphela kubuxoki, injongo enzima kwiminyaka elishumi yowe-1830 eyayikhathazwa yingxaki yezoqoqosho eyachaphazela icandelo lezoncwadi. Emva uzuze ibhaso ngencwadi yakhe emfutshane ebhalwe kwibhotilePoe wathuthela eBaltimore, apho watshata khona nomzala wakhe uVirginia Clemm, owayeneminyaka elishumi elinesithathu kuphela ubudala. Ukuxhamla kwilifa lotata owamkelekileyo obudlelane bakhe buya kuphawula ubunzima uPoe azama ukububuyisela kwiminqweno yakhe yoncwadi, waqala ukubhala kwiphephandaba laseRichmond elathi ukujikeleza kwalo kwanda ngenxa yodumo lombhali, uphononongo kunye neentsomi zakhe zamaGothi, uhlobo emva koko ayaziwa eNtshona. Nangona kunjalo, ngelo xesha iingxaki zakhe zotywala zazidume kakubi.
Ngexesha leminyaka elandelayo, u-Edgar Allan Poe wadibanisa amaxesha okwamkelwa okukhulu nangaphantsi: ukusuka ekugatheni umvakalisi waseNew York kuye amabali amafutshane amabali amabali eKlabhu yeeFolio Ukuyijonga njengefomathi engeyoyorhwebo ngelo xesha, ukuya kuthi ga kwiinyanga zilambile kwipenshini ePennsylvania okanye ukuphuhliswa kwengxelo yamapolisa kwiMagazini kaGraham, eyavumela usapho ukuba luphile lelinye lawona maxesha alo oqoqosho alungileyo.
Nangona kunjalo, ukusweleka kukaVirginia ngenxa yesifo sephepha ngo-1847 kwamfaka uPoe kuxinzelelo olurhaxwe etywaleni nase-laudanum eyayiza kuphelisa ubomi bakhe ngo-Okthobha u-3, 1849, umhla owawubhalwe ngawo umbhali. Wafunyanwa ekwimeko yokudakumba kwizitrato zaseBaltimore kwiiyure ezimbalwa ngaphambi kokuba asweleke.
Iincwadi ezigqibeleleyo zikaEdgar Allan Poe
Ngaphambi kokuqhubeka, kufanele ukuba kukhunjulwe ukuba phantse yonke imisebenzi kaPoe isekwe kumabali, amabali awayebhalwe ngelo xesha kwaye ebandakanyiwe kwiingqokelela ezahlukeneyo kule minyaka ilandelayo. Ngale ndlela, sijonga eyona misebenzi mihle yombhali ngamabali akhe kunye nenoveli yakhe ekuphela kwayo.
Ingxelo ka-Arthur Gordon Pym
Inoveli kaEdgar Allan Poe kuphela Yapapashwa ngezahlulo ngo-1938, nto leyo eyakhokelela kweyona mibhalo-ngqangi yombhali. Iyelenqe elisisa kuwo onke amalwandle apho uArthur Gordon Pym aziphosa kuwo ngomnenga uGrampus. Ukulandelelana kwezidubedube kunye nokophuka kwenqanawa ekugqibeleni kukhokelela ophambili ukuba afune iimpendulo, ediniwe bubukho bakhe, kwiindawo ezikude nezizodwa zase-Antarctica. Ukukhuthazwa okuqinisekileyo kwabafundi bombhali njengoLovecraft, Inoveli iyaqhubeka nokuba yenye yeengxelo zePoe.
Ngaba ungathanda ukufunda Akukho mveliso ifunyenweyo?
Ishicilelwe ngo-1843 kwiphephancwadi lasePhiladelphia ngoMgqibelo wangokuhlwa, Ikati emnyama kunokwenzeka Ibali elidumileyo likaPoe kunye nomsasazi othembekileyo wale ndalo imbi kunye nomnyama. Ibali lisisa kwikhaya lesibini esitshatileyo esamkela ikati, isilwanyana esibulawa ngumyeni ngexesha lotywala. Ukuvela kwekati yesibini kuya kunciphisa ukuhlangana kosapho, kukhokele ukulandelwa kwisiphumo esibonisa ubuntu beli bali elibonisa inxenye yemeko awayehlala kuyo uPoe kunye neemvakalelo ezinje ngomsindo, ububi okanye umsindo.
Ishicilelwe ngo-1843 kwi-Philadelphia Dollar Newspaper, Igciwane Bug isixelela ngentlanganiso yomhlobo kaWilliam Legrand owayelilolo kunye nesicaka sakhe uJupiter kwisiqithi esikufutshane naseCharleston apho bafumana khona incwadi esongwayo ebhalwe ngokufihlakeleyo etyhila indawo ababenayo ubuncwane bepirate.
Yiba ngumqondiso wendalo yonke yePoe kwaye Umsebenzi ophambili owamenza waziwa kwilizwe jikelele, Akukho mveliso ifunyenweyo Ngumbongo opapashwe ngo-1845 kwiNew York Evening Mirror. Unikwe imeko engalunganga kunye nolwimi olwenziweyo, umsebenzi ubalisa utyelelo lwehlungulu kwifestile yomthandi osentlungwini, umqondiso wokuhla komntu ophambili esihogweni uqobo.
Ukuba ujonga i-anthology edibanisa inxenye yomsebenzi kaPoe, uhlelo lwayo Gqibezela amabali epapashwe nguPenguin uyaqokelela Imisebenzi engama-72 yombhali, kubandakanya izandulela kwiiNdaba zeKlabhu yeeFolio kunye neeNcwadi zeGrotesque kunye neeArabhu, kunye namabali asixhenxe angashicilelwanga eSpanish.
Yeyiphi imisebenzi oyithandayo yePoe?
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » Iincwadi » Ezahlukeneyo » U-Edgar Allan Poe Biography kunye neencwadi eziGqwesileyo
I-Biografi kunye neencwadi ezilungileyo zikaMiguel Delibes